Madaxweynaha Puntland oo ku soo laabtey Garowe 7 Aug 7, 2012 - 4:01:08 AM
Madaxweynaha Dowaldda Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Maxamuud Farole ayaa maanta 07 August,2012 dib ugu soo laabtey magaalada Garowe caasimada Puntland kadib safari uu afar maalmood uu kaga maqnaa dhinaca Nairobi oo kulan ku lahaayeen saxiixayaasha qorshaha nabada Somalia.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire ,wasiirada xukuumadda ,qaar kamida mudanayaasha Barlamanka ururada haweenka iyo dadweyne kale ayaa ku soo dhaweeyey Garoonka dyaaradaha Muqdisho madaxweynaha.
Wasiirka Waxbarashada Dr.Cabdi Faarax Siciid Juxa iyo Wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka Eng.Daahir Xaaji Khaliif ayaa wehelinayey wafdiga madaxweynaha.
Dr.Cabdiraxman Maxamed ayaa sheegey in safarkii Nairobi iyo kulankii uu la qaatey masuuliyiinta Somalida kala duwan uu ku soo dhamaadey guul ,waxana uu mar labaad rajo fiican mid laga qabo ku tilmaamey dhamaystirksa xiliga KMG-ah.
Xildhibaanada DF Somalia sida uu sheegey madaxweynuhu la doonayaa in lagu soo gudbiyo magacyadooda shan maalmood ee fooda inagu soo haysaa waxana uu cadeeyey in muran iyo dodo badan kadib la isku afgartey sidii loo dhamayn lahaa hawlaha ka dayacan RoadMapka.
Sidoo kale madaxweynaha waxa siisey warbixin kooban oo ku saabsan xaaladihii ugu danbeeyey ee dalka kuxigeenka Gen.Cabdisamad Cali Shire.
Dr. Farole oo diray tacsida beldajaha
Musharax Yeey oo tagay Garowe
Xildhibaan lagu qarxiyay Muqdisho